Wasiir Bayle oo dhagax dhigay dhismaha waddo laami ah oo dhirikeedu yahay 3.5km (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir Bayle oo dhagax dhigay dhismaha waddo laami ah oo dhirikeedu yahay 3.5km (SAWIRO)
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane C/raxman Ducaale Bayle oo safar shaqo ku jooga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa dhagax dhigay waddo laami ah oo dhirirkeedu gaarayo 3.5km.
Dhaqaalaha ku baxaya dhismaha wadadaan ayaa waxaa bixinaya Bangiga Aduunka, waxaana lasoo marsiiyay lacagta ku baxaysa mashruuca SSF, oo hoostimaada wasaaradda maaliyadda, taas oo shaqadeedu tahay dhismaha wadooyinka iyo dayactirka xarumaha dowladda.
Wasiir Bayle ayaa markii uu gaaray magaalada Baydhabo, waxa uu halkaasi kullan kula qaatay madax ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, wuxuuna sheegay in maanta ay u tahay maalintii ugu horeeysay uu magaaladaasi yimaado.
“Waa markii iigu horeysay oo aan imaado magaalada Baydhabo, waxaana farxad ii ah in imaatinkayga ay qeyb ka tahay furitaanka waddo laami ah oo gaaraysa 3.5km, waxayna bilaw u tahay mashaariic badan oo wasaaradu maaliyaddu ka fullinayso magaaladda Baydhabo iyo magaalooyinka kale ee gobolka” Sidaas waxaa yiri Wasiir Bayle.
Dhinaca kale, wasiir Bayle ayaa xusay in lacagta wax lagu dhisaayo ay bixiyeen dalal kale, balse ay lagama maarmaan tahay in la isku tashado oo aa anagu dhisano waxkasto oo uu dalka u baahan yahay.
Ugu dambeyntii, wasiir Bayle ka mahad-celiyey soo dhaweynta ay maamulka Koonfur Galbeed ugu sameeyeen magaalada Baydhabo, wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay inay tahay mid ku dayasho mudan.